China mota yakatariswa yedhijitari yakatsemurwa mwenje maikorosikopu S390L Kugadzira uye Fekitori | SDK
Iyo dhizaini dhizaini inofuridzirwa nechimiro chemoto wemoto. Inofananidzwa neyechinyakare yekunze dijitari kamera yakatemwa mwenje, iyo compact chitarisiko inochengetedza zvakanyanya nzvimbo. Chiremba anogona kutora uye kurekodha yakakwana anterior segment mifananidzo mune chaiyo nguva pasina kumisikidza kamera kamera usati washandisa.
Iyi michina ine meibomian gland yekuongorora, yakafara simba renji, kukwirira kwakanyanya, otomatiki kuratidzwa, otomatiki chena chiyero, uye otomatiki kuzivikanwa kwemaziso ekuruboshwe uye kurudyi panguva yekutora nekugadzira mifananidzo.
Kukwirira kwekushushikana, zviputi zvichiri pachena uye zvakapinza pasi pechiedza chidiki
Wide simba renji, iyo iris uye sclera mifananidzo yakajeka panguva imwe chete, uye iwo mavara ari echokwadi uye yunifomu
OK girazi kuchinjika
✦ Yakakwira-tsananguro optical system
Iyo Optical resolution inosvika 2700 · N mutsara mapara / mm (200 mutsara mapaundi / mm), uye ruzivo rwechironda rwakajeka.
✦ Yakavakirwa-yeyero firita
Yakavakwa-yeyero yeyeruvara firita, ine cobalt bhuruu mwenje kuvhenekera, wedzera musiyano wecorneal fluorescein sodium yakasviba mufananidzo. Kubudirira kugadzirisa iyo yakanaka yekuona chiyero chekutanga corneal epithelial spot stain.
✦ Meibomian gland kuongororwa
✦ Yakanaka ruzivo manejimendi manejimendi
Iyo kesi manejimendi system inogonesa vanachiremba kugadzira uye kugadzirisa kesi kesi, uye kubvunza makesi nekupinda mazwi akakosha. Chiremba anogona kukurumidza kunyora chirwere chemurwere mune software. Iyo sisitimu inotsigira iyo DICOM protocol, kuitira kuti iyo mifananidzo inounganidzwa neFirefly inogona kuve nyore yakabatana neyechipatara nzira yekurapa.
✦ Multifunctional pikicha yekugadzirisa basa
Vanachiremba vanogona kushandisa ekugadzirisa maturusi mune software kuyera iyo lesion nzvimbo uye kugadzirisa kupenya uye mutsauko wemufananidzo. Panguva imwecheteyo, vanachiremba vanogona kuenzanisa akawanda murwere mifananidzo kuti vaongorore maronda uye chirwere chirwere.
✦ Batsira mukugadzika kwemaorethokeratology lens
Vanachiremba vanogona kuunganidza yakakwira-tsananguro corneal fluorescein inoshatisa mafoto uye mavhidhiyo (pasina kurekodha nguva muganho) uye kutsigira yakawanda-mifananidzo kuenzanisa. Vanachiremba vanokwanisa kunyora zvakakwana maitiro eimwe neimwe lens kuendesa kwekutaurirana uye yekutevera-yekutarisa.
✦ Smart yekuburitsa kukosha kukosha
Chiremba anogona kusarudza otomatiki kuratidzira maitiro, kana kugadzirisa kukosha kwekuratidzira, uye chengetedza ma parameter se template yekuwana mifananidzo gare gare. Rondedzero yakadhindwa inogona zvakare kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nachiremba.
Nechiedza chakavhenekerwa chemwenje, chiremba anogona kunyatso kutonga mamiriro asina kukwana ezvirwere zvemeibomian.
✦ Nguva yekubvarura kuputika kwefirimu
Nayo yepamusoro-inoshanda yedhijitari module, vanachiremba vanogona kuwana iyo inobvaruka firimu kubvaruka nguva kuburikidza neiyo yepamusoro-tsananguro vhidhiyo, uye nekunyatsotonga kudzikama kweiyo misodzi firimu.
✦ Kuitisa godo uye kusvibisa kornea
Iine yakavakirwa-yeyero firita, vanachiremba vanogona kuwana yakajeka mifananidzo ye ocular pamusoro kukuvara uye kuzvimba.
✦ Kureba kwerwizi rwemisodzi
Vanachiremba vanogona kuwana kukwirira kwerwizi rwemisodzi kuburikidza neyekuyera mashandiro eMediview mufananidzo manejimendi software, uye nekunyatso kuongorora kubvarura kwekubvarura.
Maikorosikopu hurongwa waivako S390L (Firefly WDR +)
Maikorosikopu mhando Galileo Parallel Angle Rudzi
Zoom nzira 5-kumhanya dhiramu zoom mhando
Optical resolution 2700 · N waya mbiri / mm (200 waya maviri / mm)
Kukudzwa 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X
Kukudza kweziso 12.5X
Angiso yemaziso 10 °
Kupindirana kwedaro kugadzirisa renji 52mm ~ 80mm
Kugadziridza diopter -8D ~ + 8D
Munda wekuona dhayamita Ø36.2mm, Ø22.3mm, Ø14mm, -8.9mm, Ø5.7mm
Kutsemuka upamhi 0 ~ 14mm ichienderera ichigadziriswa (pa14mm, kutsemuka kuri kutenderera)
Kutsemuka kureba 1 ~ 14mm ichienderera ichigadziriswa
Aperture saizi Mm14mm, Ø10mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm
Fissure angle 0 ° ~ 180 °
Kutsemuka kutenderera 5 °, 10 °, 15 °, 20 °
Ruvara firita Kupisa kuputira firimu, kupenya kwechiedza firimu, hapana tsvuku firimu, cobalt bhuruu firimu, yakavakirwa-yeyero ruvara firita
Chiedza chechiedza akatungamirirwa
Inzwa Zvinotaurwa voltage ～ 100-240V
Rated ikozvino 1.2A
Izvo zvinobuda voltage Akatungamirira 3V, wakaiswa-maonero chiedza 15V
Kurema uye kukura
Kurongedza bhokisi 740mm x 450mm x 550mm (kureba / upamhi / kukwirira)
chakakomba kurema 23 kg
Net Kurema 17 kg
Unganidzo Equipment Kuita
Kuunganidza zvishandiso kuita 1 / 1.8 inch sensor / 2.4 micron pixels / auto exposure / auto chena chiyero / iris kugadzirisa
Dhijitari module Pixels emamirioni mazana mashanu
Mufananidzo Wenzwi 2592 x 1944
Kugadziriswa kwemifananidzo JPEG
Mufananidzo fomati 2592 x 1944
Kugadziriswa kwevhidhiyo 25fps
Vhidhiyo furemu chiyero MP4 H.264
Vhidhiyo fomati Kujekesa otomatiki
Nzira yekutsvaga USB
Pashure: Corneal topographic mufananidzo dijitari system chishandiso CT-6
Zvadaro: Ophthalmology Kaviri Binocular Inoshanda Microscope YZ20T4
Chinese Dhijitari Yakabatwa Yakatemerwa Lamp Microscope Mutengo
Chinese Slit Lamp
Dhijitari Kamera Yakatsemura Mwenje
Dhijitari Yakatsemurwa Mwenje
Ruoko Rwakabata Ruoko
Handheld Yakatsemurwa Lamp Microscope
Yakakwirira Yemhando yeChinese Yakagadziriswa Slit Lamp
Yakakwira Hunhu hweChinese Kutsemura Lamp
Yakakwira Mhando Dhijitari Inotakurika Slamp Lamp Microscope
Yakakwira Dhijitari Yakatsemurwa Lamp
Yakakwira Hunhu Dhijitari Yakatsemurwa Mwenje Ine Yemifananidzo Kugadziridza Sisitimu
Yakakwira Mhando Yechipatara Yakatsemura Mwenje
Yakakwira Hunhu Ophthalmic Led Slit Lamp
Yakakwira Mhando Inotakurika Dhijitari Yakatsemurwa Lamp
Yakakwira Hunhu Hutsemwe Lamp
Yakakwira Hunhu Hutsemwe Lamp Mutengo Mitengo Inotakurika Slit Lamp
Yepamusoro Yemhando Yakatsemura Lamp Ine Dhijitari Kamera
Yakakwira Mhando Yakasarudzika Fekitori Inotakurika Slit Lamp Microscope
Inotyaira Inotarisa Dhijitari Yakatsemura Lamp Microscope
Injini Inotarisa Dhijitari Slit Lamp Microscope
Ophthalmic Microscope Yakatsemura Mwenje Mitengo
Portable Yakatsemurwa Lamp
Portable Yakatsemurwa Lamp Mutengo
Yakatsemura Lamp Biomicroscopy
Slit Lamp maikorosikopu
Optical Biometer Colombo IoL Yakadzika Optical Shanduro